यस्ता सन्की पाइलट जसले आफुलाई आत्महत्या गर्न मन लागेपछि जहाज आकाशमा पड्काएर २३९ जनाको ज्यान लिए आखिर किन गर्य ? -
यस्ता सन्की पाइलट जसले आफुलाई आत्महत्या गर्न मन लागेपछि जहाज आकाशमा पड्काएर २३९ जनाको ज्यान लिए आखिर किन गर्य ?
विमानका पाइलटले जानी जानी आत्महत्या गर्न विमान पड्काएको रहस्य खुलेको छ । उनले आफु सहित बिमानमा रहेका २३९ जनाको पनि ज्यान लिएका छन् । एमएच ३७० फ्लाइट नम्बरको मलेसियन एअरको जहाज ४ वर्ष अघि हराएको थियो । सो जेट विमानका चालकले जानीजानी राडार बन्द गरेको खुलासा भएको हो ।
Wed-May-2018, 02:26 pm मा प्रकाशित, 188 जनाले हेर्नुभयो
शारीरिक सम्पर्क गर्दा ३८ बर्षिया महिलाको ज्यान गएपछि १९ बर्षिय प्रेमी पक्राउ आखिर कसरी ? पुरा पड्नुहोस !
शनिबार पोखरा महानगरपलिका-१० शिवमार्गबाट स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका-४ बाङगेश्वाराका २० वर्षीय जीत बहादुर विक तथा धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-६ कुम्पुरका २३ वर्षीय रोहित घले पक्राउ परेका